Home Wararka Ciyaaraha Kooxda ku dhow heshiiska Ben White oo La ogaaday.
Kooxda kubada cagta Arsenal ayaa qorsheyneyso inay miiska soo saarto dalab ka fiican midkii ay Brighton ka diiday ee ay ku doonaysay saxiixa daafaca dhexe ee Ben White.
Arsenal waxaa isaga tageen xiddigaha kala ah David Luiz, Sokratis & Shkodran Mustafi, Tababare Mikel Arteta ayaa doonaya in uu la soo saxiixdo daafac dhexe oo cusub suuqa xagaagan.
Gunners ayaa laga diiday dalab 40 milyan oo euro ah todobaadkii hore kaas oo ay ku doonaysay saxiixa daafaca dhexe ee White kaas oo ka qayb qaadanaya tartanka Euro 2020.
Haatan wargayska Football london ayaa sheegaya in ay Arsenal diyaarinayso dalab cusub oo 45 milyan ah oo ay ku doonayso saxiixa xiddiga Ben White laakiin Kooxda Brighton ayaa la filayaa in ay dalbato 50 milyan oo euro.
White ayaa kooxdiisa Brighton u ciyaaray 32 kulan premier League waxana uu haatan xulka qaranka England kala qayb galayaa tartanka Euro 2020.
Previous articleJuventus oo dalab ka gudbisay Qadka dhexe ee Sassoulo Manuel Locatelli.
Next articleWararka Suuqa kala iibsiga: PSG oo dalab u direysa Paul Pogba, Chelsea oo ku dhawaaneysa Achraf Hakimi iyo Qodob kale